Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia » Yiphile: ISanta Lucia yandisa inkqubo yayo yokuhlala eyandisiweyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukhenketho lwaseSanta Lucia lazisa ukhetho olutsha kwinkqubo yokuhlala eyandisiweyo.
USanta Lucia ukhuthaza abahambi ukuba bazibhaptize kwinkcubeko yalapha.
Inkqubo eSanta Lucia's Live it inokukhawulelana neemfuno zeentsapho, abasebenzi abakude, iwaka leminyaka kunye nabo bonke abahambi.
IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia lazise inketho entsha kwinkqubo yokuHlala eyandisiweyo, ukuphendula iindlela zokuhamba kunye neemfuno zabathengi. Iindwendwe ngoku zinokwamkela ubomi besiQithi eSaint Lucia nge-visa yokungena kangangesithuba sonyaka omnye. Ngazo zombini iinketho ze-Live it program, iSanta Lucia iyabakhuthaza abahambi ukuba bazibhaptize kwinkcubeko yalapha, ngelixa bejonga ubuhle bendalo ekuyo kwindawo yokuhlala eyandisiweyo okanye besebenza kude ngokulula.
Inkqubo eSanta Lucia's Live yaziswa kwangoko nge-2021 kutyelelo ukuya kwiiveki ezintandathu. Kulabo bafuna ukhetho lokwenza utyelelo oluninzi kulo naluphi na ubude, inqanaba lesibini le-Live it program ivumela abafaki zicelo ukuba bahlale kude kube ngunyaka nge-visa yokungena emininzi ngexabiso le-USD $ 75.
IGunya lezoKhenketho laseSanta Lucia's Yiphile bukhoma Iinketho zilungele iimfuno zeentsapho, abasebenzi abakude, iimillennials kwaye phantse wonke umhambi. Ababhenkethi banokucwangcisa ngokuzimeleyo ukutyelelwa kwabo okwandisiweyo, okanye uhambo lwabo lunokucwangciswa kwaye lwenziwe ngokwezifiso ziingcali zeLive It ezenza amava e-bespoke ekusebenzeni, ekudlaleni, ekulaleni nasekutyeni kunye nokulungiselela ikhonkrithi yendawo ezinikeleyo.
Ngelixa eSaint Lucia, iindwendwe zinokusebenza zikhululekile kwaye zithembekile, njengoko iWi-fi yasimahla inikezelwa kuso sonke isiqithi kwiihotele, izindlu zokuhlala kunye neendawo zikawonke-wonke. Iihotele ezininzi sele zinikezela ngezixhobo zokusebenza ezikude kunye nezinto ezizodwa ezenza umsebenzi kunye nebhalansi yeholide ingenamthungo. Abafakizicelo banokukhetha kwizinto ezimbini onokukhetha kuzo kumava anyanisekileyo:
Amava enzelwe ukuCwangciswa: ngononophelo olukhethwe ziiNgcali eziPhila ngeSiqithi, akukho tyelelo lunye luyafana! Inkqubo yokuntywilisela inikezela iindwendwe ngaphandle kwendlela ebethiweyo yokuhlola iindawo zikaSanta Lucia kunye nezinto ezinomtsalane ngokukhuselekileyo ngelixa zihlala njengendawo yasekuhlaleni. Ukusebenza nooNgcali beSiqithi esiPhila kubandakanya iiholide zeBarefoot, iiholide zeSerenity kunye neeTyelelo kunye neSt.
Yiphila ngokuzimeleyo: Abafakizicelo banokufaka isicelo ngokuthe ngqo kwiSebe lokuFudukela kwelinye ilizwe ukungena kwi-visa ukuya kuthi ga kunyaka omnye ngokugcwalisa iSanta Lucia Ifom yesicelo ubuncinci (2) iiveki ngaphambi komhla wokuhamba. Abafaki zicelo baya kwaziswa kwisithuba seentsuku ezi-5 ukuba isicelo samkelwe ngeleta yokuvunywa okwethutyana. Umrhumo wevisa uyahlawulwa kwisikhululo seenqwelomoya xa ufika eSaint Lucia, kunye nekopi eprintiweyo yeleta yemvume, ekufuneka ingeniswe kwigosa lezinto ezithengiswayo.